Akụkọ - Ngwaọrụ
Na P & Q, anyị ghọtara na ịdị mma dị elu, nke enyere ngwa ọrụ nke ọma na-ebute ngwaahịa dị elu, iji ihe ọfụma rụọ ọrụ yana ndụ ogologo oge. Na mgbakwunye, mmemme mmezi ihe P & Q na-eme ka arụmọrụ kacha mma, ntụkwasị obi na ogologo ndụ.
N'ihe banyere ngwá ọrụ, anyị na-eji usoro ọhụụ na nke echebara echiche echekwa ọ bụla.
Ma anyị na-enyefe ngwá ọrụ iwu ihe eji arụ ọrụ, na-arụpụta ngwa ọrụ n'ime ụlọ ma ọ bụ ọbụnakwa na-emegharị ngwa ọrụ dị adị nke na-anaghị agba ọsọ ka o kwesiri, P&Q ga-ahụ na ị nwere ngwaọrụ kwesịrị ekwesị maka ọrụ ahụ.
● Ebu ulo eji ebu ihe na ihe eji ewu ulo
● Ime ụlọ nrụgide ịnwụ anwụ na-ewu
● Ngwá ọrụ na-ewu outsourcing na njikwa
● Mgbanwe na ndozi ngwaọrụ dị ugbu a
● Ngwá ọrụ na nyocha
● Jigs na ihe ndozi
- jigs na ihe eji emeputa ihe
--Nrụgide ule na nkwenye jigs
Ngwá ọrụ ndụ gị niileakwụkwọ ikike
P&Q na-enye ndị ahịa tooling na ndụ akwụkwọ ikike. Ozugbo ugwo site n'aka ndị ahịa, P&Q ga-abụ ọrụ maka ngwa ọrụ niile na-akwụ ụgwọ na nrụzi.
Ngwá ọrụ P & Q na 100, 000 na-adịru oge ndụ. Ọ bụrụ na iwu ndị karịrị 100, 000 PC. P & Q ga - eme ngwa oru ohuru mgbe odi nkpa ma o gaghi acho ndi ahia ihe ha choro.
P & Q si nso nke ningfe nhọrọ bụ ọtụtụ; na-eke ngwaahịa sitere na 7 grams na 30 Kilogram. Anyị mgbatị nso utilizes ọkara akpaghị aka elu-mgbali anwụ-ningfe igwe, ala-nsogbu ndọda igwe, n'aka-wụsara Ebu, na ihe niile dị n'etiti.
Anyị na-enye ike dị elu, ígwè siri ike nke na-adịgide adịgide na-anwụ anwụ yana otu ojiji, nkedo ájá na-etinye ego. Rangedị akpaaka anyị dị iche iche na-enye ohere ịme ọgbatị zuru oke na nke a na-ekwughachi, yana ikike iji mee ka ndị ọrụ nka nwere nkà tinye ọrụ nka na nkedo ọ bụla. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe: ọ bụrụ na ọ chọrọ ka a tụfuo anyị nwere nkà & teknụzụ iji tụba ya. P&Q bụ ezigbo ihe ọzọ maka nhọrọ gị.